(FAALO) Dib u heshiisiinta yey dan ugujirtaa? - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
(FAALO) Dib u heshiisiinta yey dan ugujirtaa?
July 7, 2018 | Filed under: MAQAALLADA | Posted by: Caaliya
Qaran burburkii Jamhuuriyadii Soomaalida ee 1991, Dadka Soomaaliyeed ee degan Gudaha JamhuuriyaddaWaxaa ay dhibaatooyin badan kala dhaxleen Dagaaladii sokeeyo oo ahaa kuwo aad loogu hoobtey,Colaadaas kumadhisneyn mabaadiiiyo Diintoona.
Dagaaladda dhaxmarey dadka Soomaaliyeed ee walaalaha waxaa ay gaareen heerki ugu xumaa oo xitaa dad xidid iyo xigaalo ah ay isla noolaan waayaan, taasoo sababtey in dad walaalo ah ay ku kala noolaadaan magaaloonyin ama gobalo deris ah oo qabiilkoodu ama qaraabadoodu ay ku xooganyihiin.
In kastoo odeyaasha dhaqanka Soomaaliyeed badankood aysan ku guuleysan gebi ahaan in aay dalka nabadeeyaan hadana waxaa jira gobalada qaar oo ay odayaashoodda ka shaqeeyeen xasiloonida deegaankooda iyo nabad kuwada noolaashada dadkooda.
Kaalinta dowaladda ee dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed waxaa bilaabeya llah u naxariistee Madaxweyne CabdullaahiYuusufAxmed oo la oran karo wuxuu ahaa nin aad u garanaya dhibaatooyinka Colaada iyo Dagaalka iyo weliba waxyaabaha laga dhaxli karo maadaama uu mudo dheer kusoo dhixjirey jabhadenimo iyo mucaaradnimo wakhti dheer qaadatey.
Sanadkii 2007 shirkii Dib u heshiinta Qaran oo ay Muqdisho marti-gelisey waxaa uu ahaa shirka keliya oo ay dadka Soomaalliyeed oo dhan kazoo qeybgaleen, mana jirin beel ka maqan ooa an ergo iyo odey dhaqameed ka joogin shirkaas, Madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamedoo ahaa Gudoomiyaha Gudiga dib u heshiinta wuxuu sheegey in wajigii koowaad ee shirka dib heshiinta qaran uu guuleeystey, loona baahan yahay in la siiwado si loo soo afjaro colaadaha dhexyaala dadka walaalaha ah ee Soomaaliyeed.
Sida ay qabto Diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee dadka Soomaaliyeedba waxaa had iyo jeer aad u wanaagsan in laga shaqeeyo masaalixda iyo suluxa ama dib u heshiisiinta, hadii ay dhibaato dhexmarto dadka walaalaha ah, waxaa jira ayaa doqur’aanka kariinka ah iyo axaadiis laga soo weriyey Nabigeena Muxammad NNKH, waana arinta ugu weyn oo ay u xilsaaranyihiin odeyaasha dhaqan iyo culimaddaDiinta, sijoogto ah.
Golaha Fulinta Dowladda Soomaaliya Waxaa ay leeyihiin hay’ado amaWasaaradda Qaabilsan Dib u heshiisiinta Dadka Walaalaha ah ee Soomaaliyeed, Waxaa marag ma doonto ah in Dowladda dhexe iyohay’adda JimciyaddaQuruumaha ka Dhaxeysa ay kharash xoogleh ku bixiyaan dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed, lamanahayo shaqadaas muhiimka ah, mana jirto la xisaabtankii laga rabey in ay la yimaadaan gudiyadda baarlamaanka ee u xilsaaran la xisaabtanka laanta fulinta eeDowladda amaXukuumadda.
Waajibaadka rasmiga ah ee Xukuumadda Federalka ayaa ah in ay sixoog badan uga shaqeyso dib u heshiisiinta iyo masaalixda dadkaSoomaaliyeed eeDhibaatadda ay kala gaartey, Ummadda Soomaaliyeed waxay baahiweyn u qabtaan in ay hesho sulux iyo isku keened balaaran, maadaama la kala fogaadey mudo ku dhow 28 sano qaran burburkii ka dib.
Hase ahaatee mar walba dhibaatada jirta waxaa u nugul Soomaalida degan gudahaJamhuuriyadda, halka kuwa dhibaatada wadana ay u badanyihiin MadaxdaXukuumadda, badankoodna waaSoomaalida QurbahaDegan, marar badan ayaan la sheekeytey madaxda qurbajoog ah ee haysta Jinsiyadaha Shisheeyaha, badankoodnawaxay aaminsanyihiin in la kala adkaado oo awood la isku adeegdsado, iyadoo la isticmaalayo CiidankaDowladda, canshuuraha dadweynaha iyoXilalka.
Siyaasiyiinta ka soo horjeeda XukuumaddaWaxaa lagu Tilmaamikaraa, Qof Waalan oo xoog badan gacantana kuheysta mindidheer oo afleh, halka taageerayasha Xukuumadana lagutilmaami karo Dayuurad Boeing ah oo Duuliye la’aan ah, mana jirto aqliiyo aragti looga hortegi karo dhibaatadda ka imaankarta labadaas koox, mana jirto isutanasul Soomaalinimo iyo barnaamij siyaasadeed ay Dowladu ugu talo gashey dadka aan soo sheegey.
Sida aan kawada war qabno waxa tan iyo markii xukuumadda hadda jirta ay talada dalka la wareegtay caado u noqotay in ay sibareer ah ugu duusho siyaasiyiinta ka fekerka duwan, waa arrin siifogeyneysa in dadka walaalaha ah ay isku soo dhawaadan.
Waxaa dowladda looga fadhiyay sida ay ballan qaaday intii aan la dooran ka hor, in ay xoogga saari doonto dib u heshiisiin dhexmarta dadka walaalaha ah ee kala irdhoobay.
Ballantaas bedelkeedi waxaa xukuumadda hadda jirta ay sameysay ficillo caksi ku ah dib u heshiisiintaas oo hadaanan dhaqso looga hortagin keeni karta in dib loogu laabto dagaallo sokeeye iyo colaado horleh.
Waxa lagu haya shacabka Gobolka Banaadir ee ah shacabka keliya ee bixiya canshuurta dowladda tacadiyo isugujira dil, jidgooyo, maamul xumo iyo cadaadis siyaasadeed.
Shacabka Soomaaliyeed oo lagu bartay dad dulqaad badan ayaa waxaa dhici karta in ay lumiyaan dulqaadkooda haddii aanay dowladda xal u helin tacadiyada farahabadan eelagu hayo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisha degen.
Tan iyo bilowgiis anadkii 2017, waxaa magaalada Muqdisho dilal qorsheysan lagudilay dad ka badan 200 oo qof, taasoo ay dheertahay shacabka ay galaafteen kooxda Shabaab oo iyaga caado ka dhigtay dilka shacabka.
Xukuumadda waxa ay sugi la’dahay ammaanka wax ka yar 20 KM oo square ah, waxaa intaa dheer in shacabka iyo garab raratada laga xirto jidadkii ay kuraadsan lahaayeen nolol maalmeedkooda.
Aragtida saliimka ah waxay sheegeysaa in mar walba dadkaaga aad ugu shaqeysid daacadnimo, waxaa la wada ogsoon yahay in xilalka Dowladda loo wada dhaartey hadii aduunka la isku xisaabin waayo waxaa qof walba u dambeysa la xisaabtan rasmiga ah ee aakhiro kaasoo aan laga dhuuman karin, beena la sheegi karin.
Waxaan nafteyda iyo tiinaba kula dardaarmayaa inaan ka fogaano wax walba oo keeni kara colaada iyo kala fogaashaha, wiiqi karana wadanoolaan shaha, walaaltinimadu waxayku jirtaa naxariista iyo iskutanasulka.